Nahum 2 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Wɔbɛsɛe Niniwe (1-13)
“Wobebuebue nsubɔnten no ano apon” (6)
2 Nea ɔbɔ nnipa hwete no aba wo* so.+ Bɔ abannennen no ho ban. Wɛn ɔkwan no. Mia w’abɔso mu na gyina yiye. 2 Efisɛ Yehowa bɛsan de Yakob anuonyam ama no,Na ɔde Israel nso anuonyam ama no;Adesɛefo abɛsɛe wɔn,+Na wɔasɛe wɔn bobe mmaa. 3 Wɔaka n’akatakyi akyɛm ho kɔɔ,Na n’akatakyi hyehyɛ ntaade kɔkɔɔ. Ɛda a osiesie ne ho ma ɔko no,Ne nteaseɛnam ho nnade pa yerɛwyerɛw sɛ ogya, Na wokurakura mpeaw a wɔde ɔpopaw dua ayɛ. 4 Nteaseɛnam no atew praka wɔ mmorɔn so. Wɔde mmirika di mmɔnten so akɔneaba. Wɔhyerɛn te sɛ agyatɛn,* na wotu mmirika te sɛ anyinam. 5 Ɔbɛfrɛ n’abirɛmpɔn. Wɔrenantew a, wobehintiw. Wɔde mmirika kɔ ne fasu ho;Wosisi akoban.* 6 Wobebuebue nsubɔnten no ano apon,Na ahemfi no bedwiriw agu.* 7 Wɔahyɛ ato hɔ: Wɔapa ne ho ntama na wɔatam no kɔ;Ne mmaawa redi abooboo te sɛ mmorɔnoma a wɔresu,Na wɔpempem wɔn koko. 8 Niniwe+ te sɛ ɔtare fi tete,Nanso afei de wɔreguan. “Munnyina hɔ! Munnyina hɔ!” Nanso obiara nsan n’akyi.+ 9 Monsesaw dwetɛ; monsesaw sika kɔkɔɔ, Efisɛ nneɛma a wakora so nni ano. Na ahode a ɛyɛ fɛ pii wɔ hɔ. 10 Obiara afi kurow no mu, asɛe, na adan amamfo!+ Ehu ama wɔn koma atu, wɔn nkotodwe rekeka bom, wɔte yaw wɔ wɔn sisi mu,Na wɔn nyinaa anim ayɛ mmɔbɔmmɔbɔ. 11 Ɛhe na agyata te,+ na ɛhe na agyatanini* kɔ adidi?Ɛhe na agyata a obiara ntumi nhunahuna wɔn noDe wɔn mma kɔ? 12 Gyata tetew nam mu maa ne mma,Na okum mmoa maa agyatabere. Okum mmoa hyɛɛ n’amoa mu ma,Na ɔde mmoa a watetew wɔn mu hyɛɛ ne bon mu ma. 13 Asafo Yehowa asɛm ni: “Hwɛ, me ne wo anya,+Na mɛhyew wo nteaseɛnam dwerɛbee.+Na w’agyata* no, sekan bedi wɔn nam. Meremma wunnya nam nwe wɔ asaase so bio,Na wɔn a wosomasoma wɔn no, obiara rente wɔn nka bio.”+
^ Kyerɛ sɛ, Niniwe.
^ Anaa “bɛnan.”
^ Anaa “agyatanini a wɔn ho yɛ den.”
^ Anaa “w’agyatanini a wɔn ho yɛ den.”